ဆရာ​ချစ် ဖြေ​ခဲ့​တဲ့ အင်တာဗျူး (အသစ်) | J-Myanmar
Q – ဆရာ​ချစ် အရင်​တစ်​ခါ​လုပ်​သွား​တဲ့ ဂစ်​တာ​ပွဲတော်​ကို​ရော ထပ်​လုပ်​ဖို့ အစီ​အစဉ် ရှိ​ပါ​သေး​လား??
Sayar Chit – ပြောထား​တာ​တော့ ရှိ​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​လို​မျိုး​ကတော့ လာ​မယ့်​ရှေ့​နှစ်​လောက်​မှာ လုပ်​ဖို့​ဖြစ်​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ရှေ့​နှစ်​မှာ​တော့ ဖြစ်​အောင်​ကြိုးစား​မှာ​ပါ။
Q – အရင်​ပွဲ​မှာ ပရိသတ်​တုံ့​ပြန်​မှု​က​ရော ဘယ်​လို​ပြန်ကြား​ရ​ပါ​သလဲ??
Sayar Chit – ပရိသတ်​တုံ့​ပြန်​မှု​ကတော့ အခု​နောက်​ပိုင်း​မှာ ဂစ်​တာ​သမား​တွေ​ကို အားပေး​လာ​တာ တွေ့​ရ​တော့ ဂစ်​တာ​ပွဲတော်​မှာ ပရိသတ်​အားပေး​မှု​ကတော့ အထိုက်​အလျောက် ရှိ​ပါ​တယ်။
Q – ဆရာ​ချစ်​အနေ​နဲ့ ဂစ်​တာ​ပွဲတော်​ကို စ​လုပ်​တဲ့​အချိန်​မှာ ပရိသတ်​နဲ့ နည်း⁠နည်း​စိမ်း​နေ​မယ်​လို့ ထင်​ထား​လား??
Sayar Chit – ကျွန်တော် ပွဲ​စ​လုပ်​တဲ့​အချိန်​တုန်း​က​လည်း အဲ​ဒီ​လို​ပဲ တွေး​ခဲ့​ဖူး​ပါ​တယ်။ ပရိသတ်​က အဆိုတော်​တွေ​ကို​ပဲ အားပေး​မယ်။ ကျွန်တော်​တို့ အတီး​သမား​တွေ​ကို အား​မ​ပေး​ဘူး​လို့ ထင်​ထား​ပေ​မယ့် ဂစ်​တာ​ပွဲတော်​ရောက်​တော့ ပရိသတ်​အပြည့်​ပါ​ပဲ။ ကျွန်တော် ထင်​ထား​တာ​ထက်​ကို တကယ်​မြင်​ရ​တာ​ကတော့ Music ကို တကယ်​ဝါသနာ​ပါ​တဲ့ ဂီ​တသ​မား​တွေ တော်တော်​များ​ပါ​တယ်။
Q – တစ်​ချို့​ဆို​ရင် ဆရာ​ချစ် မျှဝေ​မယ့် ပညာ​လိုချင်​ပေ​မယ့် ဆရာ​ချစ် ဆီ​ကို လာ​ဖို့​က မ​ရဲ​တဲ့​သူ​တွေ ရှိ​တယ်။ သူ​တို့​က​လည်း ဂီ​တ​ကို တကယ် ဝါသနာ​ပါ​တယ်​ဆို​ရင် ဆရာ​ချစ် အနေ​နဲ့ ဘယ်​လို​ကူညီ​ပေး​နိုင်​ပါ​သလဲ??
Sayar Chit – အရင်​ကတော့ ကျွန်တော် စာ​လေး​တွေ ရေး​ပြီး အကြံပေး​ပါ​တယ်။ အခု​ချိန်​မှာ​တော့ အင်​တာ​နက်​ခေတ် ဆို​တော့ ကျွန်တော် Facebook က​နေ ရေး​ပေး​ပါ​တယ်။ ကိုယ်​တတ်နိုင်​သ​လောက် အကြံ​ဥာဏ်​ပေး​သ​လို တခြား ဆရာ​ကောင်း​တွေ​နဲ့​လည်း မိတ်​ဆက်​ပေး​ပါ​တယ်။
Credit to Welcome to Rock ‘n’ Roll
Q – ဆရာ​ချစ်​က အင်တာဗျူး​တွေ သိပ်​မ​ဖြေ​ဖြစ်​တော့ ကြုံ​တုန်း​ပေါ့​လေ။ လူ​ငယ် အတီး​သမား​လေး​တွေ​အတွက် စကားလက်ဆောင် ပြော​ပေး​ပါ​ဦး??
Sayar Chit – ဟုတ်​ပါ​တယ်။ ကျွန်တော် အင်တာဗျူး သိပ်​မ​ဖြေ​ပါ​ဘူး။ ကျွန်တော်​ပြော​ချင်​တာ​ကတော့ ကိုယ်လုပ်​ချင်​တဲ့​လမ်း​ကို ပန်းတိုင်​ရောက်​အောင် အဓိက သန့်သန့်​ရှင်း⁠ရှင်း​နဲ့ ကြိုးစား​ကြ​ပါ။ ကြိုးစား​တဲ့​နေရာ​မှာ အား​သွန်​ခွန်​စိုက်​နဲ့ ဆရာ​ကောင်း
Next post အဖေါ်​မဲ့​အထီးကျန် ( ၁ )
Previous post အိုင်း​စ​တိုင်း နှင့် ပက်​သက် ၍ လူ​သိ နည်း​သော အကြောင်း အရာ အချို့